Nei usingashandisi mharidzo uye chii chakavhurika sosi maturusi chitsiva | Linux Vakapindwa muropa
Mazhinji maLinux anogovera anouya akafanotangira LibreOffice uye zvese zvinosanganisira yekuratidzira application mune yavo pre-yekuisa.
Izvi zvinogona kunge zvisiri izvo kwenguva refu. Zvese zviri zviviri zvemunyika yemubatanidzwa uye mune zvedzidzo, pane kubvumirana kuti mharidzo dzinofanirwa kushandiswa zvishoma sezvinobvira.
Ichokwadi ndechekuti vashoropodzi vezviratidziro vanobvumirana kuti kwavo kushandisa pigeonholes misangano, ichivamanikidza kuti vafambe zvishoma nezvishoma munzira imwe. Chii chimwe, Izvo zvinoratidzirwa kukanganisa kutarisisa, kuita kuti kunzwisisa kunetse, uye kudzikisira kuchengetedza. Uye ngatiregei kutaura pamusoro pekuti dhizaini wekuratidzira akauya neanowedzera mifananidzo uye manzwi anonakidza.
1 Wadii kushandisa mharidzo uye chii kuti utsive nazvo
1.1 Muenzaniso 1: Kuita sarudzo
1.2 Muenzaniso 2: Misangano
Wadii kushandisa mharidzo uye chii kuti utsive nazvo
Kusvikira kuma90 hapana munhu akashandisa Powerpoint uye kunyangwe zvakadaro tasvika pamwedzi, takagadzira komputa uye isu takarwa nezvirwere zvakauraya mamirioni avanhu. Ini handisi kuzotaura kuti kukanganisa kwehutachiona kuve nesu kumba sekunge isu taive muMiddle Ages imhosva yechigadzirwa cheMicrosoft, nekuti kunyangwe yeblog iri pamusoro peLinux yakawandisa. Kunyangwe nhengo yePentagon ichinzi yakataura kuti Microsoft ine Powerpoint yakakanganisa zvakanyanya kudzivirirwa kweUnited States kupfuura vese maChinese neRussia matsotsi akabatanidzwa.
Asi, hapana mubvunzo kuti kupindwa muropa nemharidzo kuri Chimwe chezvikonzero kune iro chizvarwa cheanodanwa ma digital digiti ndiko kwekutanga aine yakaderera IQ kupfuura vabereki vavo.
Izvo hazvireve kuti isu tinofanirwa kudzokera kumazuva ema slide projekita. kana kukrete uye mabhodhi. Isu tinongofanirwa kushandisa zvimwe zvishandiso nenzira kwayo.
Tinogona zvakare kushandisa iyo yekushandisa application pachayo sekunge isu tisingawire mumuedzo wekushandisa dzimwe dzesarudzo dzayo dzisingabatsire chero chinhu.
Muenzaniso 1: Kuita sarudzo
Memorandamu zvirinani pane kuratidzwa kana zvasvika pakuita sarudzo kana kusvika pakubvumiranakana nei:
Kumanikidza varatidziri kuti vataure nemifungo yakazara pane kungoita schematics.
Ita shuwa kuti munhu wese ari chaizvo papeji imwechete panguva yehurukuro.
Deredza iyo yakazara nguva yakashandiswa mumusangano ne50-80 muzana.
Inopa hwaro hweemail rakagadziridzwa rinotsanangura musangano nemhedzisiro yacho.
Mune ino kesi zvakanakisa kunyora mapoinzi akakosha kukurukurwa mugwaro pfupi uye pasina kuwedzera ruzivo rusina basa, mafonti akaoma-kuverenga, kana marongero akaomarara kana fomati
Nekudaro, chishandiso chakakurudzirwa hachisi LibreOffice Munyori asi FocusWriter kana mupepeti weMarkdown
FocusWriter iri purogiramu inoenderana zvakakwana neLibreOffice, asi inokutendera iwe kunyora pasina zvinokanganisa sezvo ichivanza bhatani kunze kwekunge ichidikanwa. Uye zvakare, iyo inongobvumidza yakasarudzika mafomati sarudzo.
Inowanikwa mune zvinyorwa zvekutanga zvekuparadzirwa kweLinux uye muchitoro cheFlatPak
Imwe sarudzo ndeyeMarkdown edhita. Markdown mutauro unobvumidza iwe kuti ugadzire mameseji nenzira inoverengwa.
Huwandu hweMarkdown edhita anowanikwa kuLinux hunogona kutsanangurwa seyakaipisisa. Sarudzo yakanaka ndeye Standard amanotsi.
Ichi chirongwa chinodzivirira izvo zvirimo neakanyanya kuchengetedzwa kunyorera uye inobvumira kuwanda-chishandiso kuwiriranisa. Pakati pezvimwe zvinhu inogona kushandiswa kugadzira:
Muenzaniso 2: Misangano
Vanoti mufananidzo unokosha mazwi churu. Saka wadii kuzvishandisa?
Imwe nguva yapfuura ndakanyora chinyorwa chekuti kuve nehutongi hwehumwe ruzivo rwunodiwa nevamwe kunotendera munhu kana sangano kuwana chero chavanoda. Ini ndaishandisa mapiramidhi semuenzaniso. Farao ndiye ega aiziva kuti rwizi Nile, hwaro hwekurima kuEjipitori, hwakakura riini uye sei. Nekuda kweizvozvo, akakwanisa kutora vateresi vekuEgypt kuti vavabhadhare.
Zvino, dai pachinzvimbo chechinyorwa chaive chidzidzo, ndingadai ndakagadzira mharidzo nehurukuro ndichitsanangura hukama hwekurima nehupfumi hweEjipitori, rwizi rwaNile nezvekurima nekukura kwaro. Kana iye aigona kunge airatidza pikicha yepiramidhi uye imwe yeRwizi Nile uye akatsanangura zvimwe zvese.
Zvinokurudzirwa nenyanzvi dzekudzidza.
Naizvozvo, panzvimbo pekushandisa chirongwa chehurukuro tinogona kushandisa muoni wemufananidzos. Yese tafura ine imwe, uye ivo vese vane imwe nzira yekuratidzira. Tinofanira kungova nechokwadi Ita shuwa kuti mifananidzo iri pane chaiyo resolution kuitira kuti vataridzike zvakanaka kana vafungidzirwa pachiratidziri. Uye, izvo zvinogona kuitwa zvakakwana neiyo Gimp.
Kana iwe uchida kushandisa chishandiso chakasiyana pane icho chinounzwa nedesktop yako nekutadza, imv ndiwen muoni wemufananidzo uyo unogona kushandiswa kubva kune chinouraya.
Tsigiro yeWayland uye X11
Tsigiro yemafomati akawanda emifananidzo uye animated gif.
Inotsigira kushandiswa kwescript.
Inotendera kuratidza mifananidzo mune yakasarudzika fomati
Imv iri munzvimbo dzekuchengetera kwekuparadzirwa kukuru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Wadii kushandisa mharidzo uye chii chakavhurika sosi maturusi kutsiva iwo
Pamwe iwe unofanirwa kudzidza mashandisiro epamberi Impress (inogadzirisa zvese zvaunotaura)… uye nzira yaMunyori yekusavhiringidza.
Ini handina kunyora chinyorwa ndichipesana neImpress asi ndichipesana nekushungurudzwa kwemharidzo.
Muchokwadi, ini ndine chinyorwa chinokurudzira chirongwa ichi chekumwe kushandiswa
Chinangwa changu ndechekuita kuti mamwe mapurogiramu azivikanwe uye nekuwedzera mashandisiro eanozivikanwa kare.
1- Nekuti hapana chirevo chandakaisa muboka rako rezvenhau clickbait (kubva ku linux, muylinux, ubunlog, nezvimwewo) hapana chirevo chinozvigadzirisa chinotenderwa (izvi zvakaipa kupfuura Xataka)
2- "Microsoft ine Powerpoint yakaita zvakanyanya kukuvara kudziviriro kweUnited States kupfuura vese maChinese neRussia matsotsi akabatanidzwa." izvo zvakataurwa maererano neMicrosoft software zvakawandisa (kunyanya iri yega) kwete nezve mharidzo, zvinotorwa kwazvo kubva mumamiriro ezvinhu.
3-Mira yakanyanya-yemahara clickbait spyware kushambadza, ndapota, izvi zvinofanirwa kunge zviri zvepakati nezvemahara software, kwete nezve kana ndichifanira kuisa hanyanisi mumasokisi angu.
Kana vakashambadza chirevo changu (handifunge kudaro) maita basa, kana zvisiri, vakarasikirwa nevashanyi vanomwe (mhuri yangu neni)
1) Handina kumbobvira ndaongorora chero zvirevo kuzvinyorwa zvangu. Zvimwe zvinogona kunge zvine mwero uye mune avalanche yemashoko zvinondipfuura.
2) Ndinovimbisa kutsvaga kusangana, asi hazvingakurumidze.
4) Kana ini ndisina kumboburitsa chirevo chawakaita kuchinyorwa changu, tinya pazita rangu uye pasi pemapikicha angu uchaona chinongedzo kumasocial network
Iye egomaniac uyo anotendera makomendi aanopindura uye hapana chimwe chinhu, paari ega nhoroondo yezvaanoona zvakakosha uye izvo kwete, kushambadza, zvinoenderana nehungwaru hwake, zvisinei nemabatiro ehunhu hwakanaka; imwe, kwete kuendesa makomendi kuti abvumidzwe; zviviri, usaite chero dziviriro kupfuura iyo yechinyorwa chaicho chakamboitwa uye nhatu, sezvo ichiendeswa kuti chibvumidzwe, shambadza zvakanyorwa mune zvakataurwa, zvisinei kuti zvakapusa sei uye kunyangwe hazvo zvisingabatsiri zvakadii, kutenda muverengi nekutora dambudziko kuti uverenge zvakanyorwa kunyangwe zvazvakanakira kana kushomeka kwekukodzera, kana zvirinani nezve chokwadi chiri nyore chekupa yako email.
Zvirokwazvo, kubva pasirese yemahara software, yemahara software, nekuti pasi rese rakarikomberedza rinosiya zvakanyanya kudikanwa ...
Mumakore maviri andanga ndiri paLinux Vakapindwa muropa, ini ndakangodzima imwechete. Yaive nekutuka uye yakanga isiri kunyange kubva kuchinyorwa changu.
Kune vamwe vese, mutemo wekubvumidzwa kwekutaura unogadzirirwa nevapepeti, ini handina danho pane iyo nyaya
Unogona kana kusabvumirana nemupepeti, asi kana iwe ukataura izvi: "Zvirokwazvo, kubva pasoftware yemahara, software yemahara, nekuti pasi rese rakarikomberedza rinosiya zvakanyanya kudiwa ...", iwe unonyatso don ' t ziva zvakawanda nezvazvo.kuti iwe unotaura uye zvinosuwisa kuti iwe unovhiringidza vamwe vanhu vanogona kukuverenga iwe.
Chaizvoizvo, asiri-emahara kana echirongwa zvirongwa zvinosiya zvakawanda kuti zvidikanwe, zvakaganhurirwa kune iyo nguva iyo mushandisi anoda kuigadzirisazve, kuwedzera uye kuigovera zvakare. Chaizvoizvo haugone.
Vakakwanisa kuburitsa kiyi inoshandiswa muIntel processors kunyorera zvinyorwa